204 views •0shares
काठमाडौं, २८ वैशाख । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो आफ्नो भन्दै चीनले प्रचार गरेको छ । उसले सगरमाथाको तस्बिरहरु राखेर सगरमाथा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा रहेको भन्दै प्रचारप्रसार गरेको हो ।
२ मे मा चीनको राष्ट्रिय टेलिभिजन चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्कले आधिकारिक ट्वीटर पेजमा चोमोलोङमाको चुचुरो माथि देखिएको विशेष किसिमको सुर्यको दृश्य भनी तस्बिर राखेको छ । जसमा विश्वको सर्वोच्च शिखर माउन्ट एभरेष्ट चीनमा पर्छ भनिएको छ ।
चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क चीन सरकारको आधिकारिक टेलिभिजन हो । यो विश्व परिवेशमा चीनको आधिकारिक धारणा र समाचार प्रसारण र प्रकाशन गर्छ । उक्त टेलिभिजनमा सगरमाथा चीनमा पर्छ भनी उल्लेख गर्नुले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चीनमा सगरमाथालाई कोमोलोङमा भन्ने गरिन्छ ।
सगरमाथाको चुचुरो नेपालमा पर्छ र यसलाई विश्वले पनि स्वीकार्दै आएको छ । तर, चीनले पछिल्लो समय विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालाई कोमोलोङमा भन्दै आफ्नो देशमा पर्ने प्रचार गर्न थालेको छ । चीनले सगरमाथाको उचाई आफ्नो तर्फबाट नाप्न थालेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले नेपाली पक्षसँग संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाई नाप्द दबाब दिने गरेको छ । तर, नेपालले आफ्नै खर्चमा आफै नापिरहेको छ । चिनियाँ पक्षले सगरमाथालाई साझा देखाउने र यसको चुचुरोमा आफ्नो पनि अधिकार रहेको प्रमाणित गर्ने क्रियाकलाप गरिरहेको छ ।
कोरोनाः विश्वभर दुई लाख ७६ बढिको मृत्यु
153 views •0shares
काठमाडौं, बैशाख २७ । महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर दुई लाख ७६ हजार दुई सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ ।
हालसम्मको तथ्यांक अनुसार विश्वका ४० लाख १२ हजार सात सय ७० जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । यस्तै, १३ लाख ८५ हजार एक सय २३ जना भने उपचारपछि निको भएका छन् ।
अहिले विश्वकै कोरोना प्रभावित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका भएको छ । अमेरिकामा ७८ हजार ६ सय १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने १३ लाख २१ हजार ७८५ जना संक्रमित फेला परेका छन् ।
अमेरिकामा कोरोनाबाट मृत्युहुुनेको संख्या झण्डै ७० हजार
161 views •0shares
कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा मृत्यु हुनेको संख्या ७० हजार नजिक पुगेको छ। मंगलबार बिहान सम्मको तथ्याङक अनुसार कोरोनाको संक्रमणबाट अमेरिकामा ६९ हजार ९ सय २१ जनाको मृत्यु भएको छ।
त्यस्तै, १२ लाख १२ हजार ८ सय ३५ सय कोरोना संक्रमित पुगेको छन। हालसम्म अमेरिकामा एक लाख ८८ हजार २७ जना कोरोना मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन् ।
पाकिस्तानमा कोरोनाबाट झण्डै १९ हजार सङ्क्रमित, मृतक संख्या चार सय भन्दा बढी
174 views •0shares
२१ वैशाख । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पाकिस्तानमा सङ्क्रमितको संख्या झण्डै १९ हजार पुगेको छ ।
पाकिस्तानी अधिकारीहरुले आइतबार दिएको जानकारी अनुसार देशभरी कुल १८ हजार ८०९ जना सङ्क्रमित भएका हुन् । त्यसैगरी कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४३२ पुगेको पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
पछिल्लो विवरण अनुसार पञ्जाब प्रान्तमा छ हजार ८५४ जना, सिन्धमा सात हजार १०२ जना, केपीमा दुई हजार ९०७ जना र बालुचिस्तानमा एक हजार १७२ जना सङ्क्रमित भएका छन् । पछिल्लो २४ घण्टामा १८ जना स्वास्थ्यकर्मी पनि सङ्क्रमित भएका छन् । तीमध्ये १५ जना त चिकित्सक नै रहेका छन् ।रासस File Photo
कोरोनाभाइरसः ‘साउदी अरब अत्यधिक पीडादायी निर्णय लिँदैछ’
152 views •0shares
साउदी अरबका अर्थमन्त्री मोहम्मद अल–जदानले कोरोनाभाइरसको संक्रमणले अर्थव्यवस्थामाथि जुन चोट पुगेको छ त्यससँग जुध्नका लागि कडा र पीडादायी निर्णय लिइने जानकारी दिए ।
शनिबार अल अरेबिया टिभीलाई दिएको अन्तरवार्तामा अल–अदानले साउदी अरबले बजेट खर्चमा भारी कटौती गर्ने जानकारी दिएको छ । उनले कोरोनाभाइरसको असर यसै वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा अर्थव्यवस्थामा स्पष्ट रुपमा देखिने बताएका छन् । अल–जदानले सबै कुरा अनुशासित ढङ्गले अघि बढाउन साउदी अरबले अब आर्थिक पाटो थप कडा बढाउने जानकारी दिए ।
साउदीका अर्थमन्त्रीले मुलुकभित्र मेगा प्रोजेक्टको खर्चमा भारी कटौली गर्ने पनि जानकारी दिए । संसारको सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यातक देश साउदी अरब ऐतिहासिक रुपमा तेलको कमीसँग जुधिरहेको छ ।
साउदी अरबको केन्द्रीय बैंकमा विदेशी मुद्रा भण्डार मार्च महिनामा पछिल्लो २० वर्षमा सबैभन्दा तीब्र रुपमा खस्किएको छ । सन् २०११ पछि सबैभन्दा तल्लो स्तरमा आइपुगेको छ ।
तेलको मूल्य खस्किएपछि पहिलो त्रैमासिकमा ९ अर्ब डलरको बजेट घाटा भएको छ । जदानले पछिल्लो महिना नै साउदी अरबले विदेशी मुद्रा भण्डारलाई सन्तुलित बनाउन यस वर्ष २६ अर्ब डलरको ऋण लिन सकिने बताएका थिए ।
Watch: #SaudiArabia is facing the crisis fromaposition of strength, but the kingdom is willing to take “painful steps” to mitigate the impact of the #coronavirus pandemic, Finance Minister Mohammed Al-Jadaan tells Al Arabiya. https://english.alarabiya.net/en/business/economy/2020/05/02/Coronavirus-Painful-steps-ahead-to-fight-economic-downturn-Saudi-finance-minister.html …
12:58 AM - May 3, 2020
संकटमा किन छ साउदी ?
साउदी अरबको मोटिरी अथोरिटीले मंगलबार साउदी अरबको विदेशी सम्पत्तिमा ४६४ अर्ब डलरको गिरावट आएको जानकारी दिएको थियो । यो पछिल्लो १९ वर्षमा सबैभन्दा तल्लो स्तरमा छ । साउदीका अनुसार यस्तो कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण भएको हो ।
अर्थमन्त्रीले भविष्यमा लिइने कदम र निर्णयलाई हालसम्म भएको क्षतीको भरपाई गर्ने हिसाबले अघि बढाउने बताएका छन् । तेल र ‘नन–ओइल’ राजस्वमा गिरावट आगामी त्रैमासिकमा देखिने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् ।
जदानले भने, ‘यसै वर्षको सुरुवातमा तेलको मूल्य ६० डलर प्रति ब्यारल थियो र आज २० डलर प्रति ब्यारल छ । यो ५० प्रतिशतभन्दा पनि बढी गिरावट हो ।’
साउदी अरबले पनि संक्रमण रोक्नका लागि धेरैजसो शहरमा लकडाउन र कर्फ्यू लागू गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय हवाई सेवा पूर्ण रुपमा बन्द छ । यसै कारण पनि साउदीको नन ओइल राजस्व पूर्ण रुपमा प्रभावित भएको हो । मानिसहरु घरभित्रै बन्द छन् र सबै कारोबार बन्द छ ।’
165 views •0shares
689 views • 12 shares
1.1K views •9shares
२० वैशाख । अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहेको एउटा नर्सिङ होममा ९८ जनाको मृत्यु भएको छ । उनीहरु सवैको कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको अधिकारीहरुले शुक्रबार जानकारी दिएका छन् ।
अमेरिकामा अहिलेपनि देशभरी नौ लाख चार हजार १५३ जना सङ्क्रमित अवस्थामै रहेका छन् । ती मध्ये १६ हजार ४८१ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्वास्थ्य अधिकारीहरुले जनाएका छन् । विश्वभरी कुल संक्रमितको संख्या भने ३४ लाख १४ हजार २७ रहेको बेला कुल मृतकको संख्या दुई लाख ३९ हजार ७७७ रहेको छ ।रासस
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा ऊहानलाई बधाई
1.3K views • 12 shares
कोरोनाभाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएकोमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले चिनियाँ सहर ऊहानलाई बधाई दिएको छ । शहरमा कोरोनाभाइरसका गम्भीर बिरामी बाँकी नरहेको भन्दै डब्लुएचओको स्वास्थ्य आपत्काल कार्यक्रमकी प्रमुख प्राविधिक डा. मारिया भान कर्खोभले ऊहानलाई बधाई दिएकी हुन् ।
‘ऊहानमा कोही पनि गम्भीर संक्रमित बाँकी नरहेको समाचार निकै सुखद छ । सुरुवातमा उक्त सहर नै निकै पीडा भोग्नुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘निरन्तर प्रयासका लागि ऊहानका जनतालाई धन्यवाद ।’
उनले आपत्कालिन उपायहरु पालना गरेर घर बसेका सबै जनतालाई पनि धन्यवाद दिइन् ।
‘तपाईंहरुको प्रतिबद्धता र सेवाको साथै विश्वलाई तपाईंहरुले गर्नुभएको काम साझा गर्नुभएकोमा बधाई तथा धन्यवाद,’ उनले भनिन् ।
चीनमा कोरोनाभाइरस महामारीको ग्राउन्ड जिरो रहेको ऊहानलाई गत जनवरीमा लकडाउन गरिएको थियो ।
पाकिस्तानमा डाक्टरले नभई धार्मिक नेताले कोरोना भाइरस सम्बन्धि नीति बनाइरहेको खुलासा
1.9K views •0shares
एजेन्सी, २० एजेन्सी । पाकिस्तान मुस्लिम बाहुल्यको देश मात्र होइन त्यहाँ धर्मगुरु र नेताहरु प्रभावशाली छन् । त्यहाँ कसलाई शासनसत्तामा ल्याउने सम्मको निर्णय क्षमता राख्छन् धार्मिक नेताहरु ।
पाकिस्तान अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट निकै प्रभावित छ । त्यहाँ संक्रमण फैलँदो छ । १० हजारभन्दा बढी मानिस कोरोना संक्रमित भइसकेको तथ्यांक छ । तैपनि, पाकिस्तानमा कोरोना भाइरस रोकथामको नीति प्रभावशाली हुन सकेको छैन ।
पाकिस्तान न्युजविकका कन्सल्टिङ सम्पादक खालिद अहमदले इन्डियन एक्सप्रेसमा आज प्रकाशित लेखमा पाकिस्तानमा डाक्टरले नभई धार्मिक नेताले कोभिड नीति बनाइरहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि धार्मिक नेताले भनेबमोजिम गरिरहेको तथ्यहरु उल्लेख गरेका छन् ।
डाक्टरहरुले मस्जिदमा भीड हुन नदिन र पाकाहरुलाई कोरोना संक्रमणबा बचाउनुपर्ने राय सल्लाह दिंदा पनि कार्यान्वयन नभएको अहमदको लेखमा भनिएको छ । इमरान खान समेत धर्मगुरु र धार्मिक नेताहरुको नीतिलाई नै मानेर चलेको भनेका छन् ।